Freedom အစား Proxy Software အသစ် — MYSTERY ZILLION
Freedom အစား Proxy Software အသစ်
November 2007 edited January 2010 in Internet & Email
ခုချိန်မှာ အင်တာနက် သုံးရင် ဘမ်းထားတဲ့ ဆိုက်က များနေတော့ တော်တော် ဒုတ်ခရောက်တယ်ဗျား Your Freedom ကလည်း အချိန်ပြည့်ဖွင့်မထားနိုင်ဘူး စက်လေးတာကို။ အဲဒီအတွက် UltraSurf 8.7 ကိုသုံးကြည့်ပါ။ Install လုပ်စရာမလိုဘူး။ Run လိုက်ယုံဘဲ ဖွင့်လိုက်ရင် Proxy Setting ပေါ်လာမယ် အဲဒါကိုဖြည့် ပီးရင် အိုကေ လုပ်လိုက် သူ့ဟာသူ Server ရှာလိ်မ့်မယ် ကွန်နက်ရှင်ရပြီဆိုရင် Chinese Page တခု တက်လာမယ် အဲဒီမှာ ဖွင့်ချင်တာ ဖွင့်ယုံဘဲ။မြန်တယ်။ခုတော့ တနေကုန် သူ့ကိုဖွင့်ထားတာဘဲ။သုံးပြီးလို့ ပိတ်မယ်ဆိုရင် UltraSurf ကို ပိတ်မယ်ဆိုရင် Close IE &EXit ကို နှိပ်ပေးလိုက် ပုံမှန် Connection အတိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
အိုး ..... သိပ်ကောင်းတယ်ဗျာ.....
ကျေးဇူးပါ.... အရမ်းအရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ..... (ကျေးဇူး....ကျေးဇူး....)
ကျွန်တော်လည်း အဲဒါကို ပြောင်းသုံးနေပါတယ်...
လူသုံးများလာတာနဲ့ ကြောက်ရတဲ့ အန္တရာယ် ၂ ခု ရှိတယ်။
နောက်တစ်ခုက အဘန် ခံရခြင်းတို့ ပါ။
update လေးတောင်သူက auto ပေးသေးတယ်..
တို့တော့..8.8 တောင် ရထားပြီ
Firefox မှာ သုံးချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ip address ပြောင်းရုံနဲ့ မရဘူးဖြစ်နေလို့။
proxy ကို 127.0.0.1
port ကို 9666
ပြောင်းလိုက်ပါက သုံးလို့ ရပါပြီ။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရင် ဖိုင်တွေ Corrupt ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်.... အဲဒါတော့ဆိုးတယ်ဗျာ:((
freedom ကပိုငြိမ်တယ်ဗျ ၊ ultrasurf က တချို့site တွေဆို မရဘူး ၊ ဥပမာ - megaupload လိုမျိုး ပေါ ့
ငြိမ်တာကတော့ Freedom က ပိုငြိမ်တယ်ဗျား..
ဒါပေမယ့် အဲဒီ Freedom က စက်တိုင်းမှာ အင်စတော လုပ်လို့မရဘူး ပြသနာ နည်းနည်းပေးတယ်
Ultrasurf က အဲဒီပြသနာ မရှိဘူးအလွယ်တကူ သုံးလို့ရတယ်....
ဖိုင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့မရတာက Ultrasurf Connection Fail ဖြစ်သွားလို့ပါ....
ကျော်သုံးတယ်ဆိုကတည်းက နည်းနည်းတော့ စိတ်ရှည်ရတာပေါ့ဗျား
multi proxy သုံးထားတယ်.နှစ်ခုသုံးရင်အဆင်ပြေပါ့မလား.ရှုပ်ကုန်မလား.:106:
Multi proxy ကို ဘယ်နိုင်ငံကနေ သုံးတာလဲဗျ။ ကျွန်တော်တို့ကို လည်း သုံးပုံ သုံးနည်းလေး မျှပါ။
ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပါ.ကျမလည်းတစ်ဆင့်ရထားတာပါ.သူက bagan server အတွက် example ပြထားပါတယ်.အောက်က link မှာအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်.
ခုချိန်မှာတော့... ဖရီးဒမ်းကကောင်းနေပြန်ပြီ.. ကွန်နက်ရှင်ပေါက်စလေးနဲ့ဖရီးဒမ်းသုံးမှ...ဂျီတော့လေးနဲ့ဂျီမေးလ်ကအိုကေ.. မိုဇီလာလေးကို လိုကယ်ဟို့စ်လေးနဲ့ချိတ်..ဆိုဒ်တွေလဲအိုကေ တနေ့လုံးလဲဂျီတော့မကျဘူး..အဲလိုကောင်းတာ.. ယူထရလေးကပေါ့တာတစ်ခုပါဘဲ...ခုဆို စက်တိုင်းမှာလဲ ဂျာဗားကရှိနေကြပြီဆိုတော့.. ဖရီးဒမ်းလေးကို..သဘောကျတယ်..
Ultra က ဖရီးဒန်းလောက်မငြိမ်ဘူးဗျ။ ကော်နက်ရှင် ကျ ကျသွားတယ်။ ရရင် တော့ ဖရီးဒန်းထက်ပိုပေါ့ တယ်ဗျ။ သုံးလို့တော့ကောင်းတယ်။ ရွှတ်ခနဲ၊ ရွှတ်ခနဲဘဲ ၊ ယူထားရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ
restart လုပ်ရင်တော့ ကော်နက်ရှင် ပြုတ်သွားတတ်တယ် တစ်ခါတစ်လေ DHCP တောင်မတက်တော့ဘူး
MPT Router အစား TrendNet ကိုလဲပြီးသုံးတာအဆင်မပြေလို့
ကော်နက်ရှင်ရပြီး website မကျလို့ ကူညီပေးပါအုံး
proxy နှင့် port ကို ပြောင်းလိုက်ပေမဲ့ firefox နဲ့ တက်မလာပါဘူး။ connection failed ပဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။
i use freegate 6.80
proxy and port is 127.0.0.1 :8580
freegate ကော ultrasulf ကော ကျွန်တော် အကြိုက်ပါ
သုံးရတာလည်း ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ရှိတယ်
်ဆိုဒ်တော်တော် များများ လည်း ကျော်နိုင်တယ်
ကျော်ဖို့ ဆို ဒါတွေပဲ သုံးလိုက်တာပဲ ကျွန်တော် တော့